လွမ်းရိပ်ညို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » လွမ်းရိပ်ညို	7
Posted by ဖိုးသာထူး on Nov 11, 2016 in Poetry |7comments
** ဟိုတောင်ထိတ်က လွမ်းရိပ်ညို **
>> ဟိုး .. တောင်ထိပ်မှာ
ကြွေလေတော့နော် …. ။
ရှိစေတော့နော် …. ။
ဟိုးးး .. တောင်ထိတ်မှာ
မိုးရိပ်တွေလည်း ပြိုပြီလေ …. ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကာရံ နည်းနည်းလျှော့ပေးလိုက်ရင် ဒီ့ထက်ပိုကောင်းမှာရယ်။
ဖိုးသာထူး says: အမှန်တော့
နားမလည်လို့ ဘာမှမလုပ်တတ် . .
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မောင်စိန်ဝင်းရဲ့လက်ရာမျိုး
ဖိုးသာထူး says: မောင်စိန်ဝင်းလက်ရာမျိုးဆိုတာထက်. . .
မောင်စိန်ဝင်းရဲ့ စကားလုံးတွေပါနေတယ်ဆိုရင်ပိုမှန်ပါတယ် ။
ငယ်စဉ်က အတော်လေးလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရတာကိုးးး . . . Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12047
Thint Aye Yeik says: ဟာာာာာာာ
ဖိုးသာထူး says: ကဗျာမဟုတ်ဘူးးးး
” ကာရံအမှိုက်ပုံး ” Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7169
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ကြိုက်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.